Ndị Bishọp: 'Kwụsị ime ndị ọchịehi ka ụmụnna gị' - BBC News Ìgbò
Ndị Bishọp: 'Kwụsị ime ndị ọchịehi ka ụmụnna gị'
Image copyright Anglicancommunionawka.com
Nkenke aha onyonyo Bishop Alex Ibezim bụ Bishọp ndị Angịlịkan na Ọka Dayasis
Ndị isi ụka Angịlịkan na Naijiria ekwuola na etu onyeisiala siri na-eso okwu nsogbu ndị ọchịehi na Naijiria jọgburu udele ma sigbuo nkapị n'isi.
Bishọp nke Angịlịkan n'Ọka Dayasis bụ Alex Ibezim kwuru nke a ka ndị Bishop mechara Sinọd nke afọ 2018 na St. Peter's Anglican Church, Amawbia, Anambra steeeti.
Image Copyright @JAMESEGBUCHULAM @JAMESEGBUCHULAM
N'ozi ha wepụtara nke ụlọakụkọ Punch gbara n'anwụ, ndị bishọp tụrụ arịrị na site na'afọ 2014 rue 2018, na ndị ọchịehi egbuola ihe karịrị mmadụ 1,229 dịka mkpamkpa ahụ kacha metụta Benue, Taraba, Nassarawa, Plateau, Kaduna nakwa Katsina steeti.
'Onweghị ndị ga-elere Ahiara Katolik Diocese anya'
Ha sị, "Ha na-eji ngwaagha kara aka wakpo ndị obodo ha bụ n'obi oge ha adịghị nkwadobe ,ọkachasị n'abalị maọbụ ụbọchị ụka oge ha nọ n'ụlọụka, na-egbu mmadụ na eleghị anya n'azụ, na-agba ụlọ ndị mmadụ ọkụ ma na-ezukwa ihe.
"Nke kachasị obi mwute bụ ka ndị ogbuochu a sị akpa ike na- echeighị maka iwu alal na kwa ndụ ndị mmadụ. Ndị uweojii na ndị agha nọkwa ka ngwere dara elụ na enweghị ike ọbụla ịzọ ndị a na-egbu na be ha."
"Ikekwa, anyị kwesiri ịjụ ndị uweojii na ndịagha ihe mere na ha enweghị ike ichekwa ndị ọrụugbo n'aka ndị ọchịehi. Ọ bụ ezie na ndị agha ọlụọla Fulani ka nwe ngwaaha kara aka ma kakwa ndị uweojii n'ọnụọgụgụ?
"Gịnị mere o ji e siri gọọmenti etiti ike imeri iyiegwu nke ndị ndị agha ọlụọla Fulani? Kedụ ndị na enye ndị Fulani ọchịehi ngwaagha ha ji ememina ndị naijiria nọrọ onwe ha?"
Ọ gbara ndị sinọd gharịị ihe mere na onyeisiala Muhammadu Buhari gbara nkịtị n'ihe na-eme dịka ha kwuru na ike ozi nkasi obi na ogolo okwu a na-ezigara ndị ihe mere akwụla ndị Naijiria.
Ndị bishọp a ndị katọrọ agha Buharị na-ebuso mmerụka ma sị na agha ahụ na ele anya n'ihu, kugidekwara agwa ọchagbute-ọchaghịgbute nke ndị ndọrọndọrọ ọchichị dịka ntuliaka 2019 na-abịa nso.
Ihe ise ị maghị maka 'Yahoo-Yahoo'
Akụkọ kachasị n'abalị: Ị hụla ndị ga-anọchite Naịjirịa n'asọmpi iko mbaụwa?
Odighị ihe mebiri nụ na APC – Ebubeagu
VP Debate: Ihe mere Peter Obi ji ewu na soshal midia
Ọ fọrọ nwa ntịị ka ọdachi mee n'ụgbọelu Air Peace?